Alakamisy 15 Jolay 2021 – FJKM
Alakamisy 15 Jolay 2021
2 Petera 3. 11- 18
Mananatra ny olona tsy ho mora voarebirebin’ny fampianaran-diso, indrindra ny momba ny fiverenan’ i Kristy ny Apostoly Petera amin’ity Epistily ity. Ambarany fa manana fanantenana ny amin’izany fiverenan’i Jesoa ihany ny mino.
Eo ampiandrasana izany anefa dia amporisihan’i Petera ny mpino mba :
1- Ho hita tsy manan-tsiny (and 14)
« Dia mazotoa mba ho hita tsy mana-tsiny amam-pondro eo anatrehan’ny Tompo amin’ny fihavanana ». Ny toe-panahy tokony ananan’ny mino eo am-piandrasana ny fiverenan’i Kristy indray no atoron’i Petera eto. Ny hevitry ny hoe : tsy manan-tsiny dia hoe : tsy milona na mijanona ho andevon’ny ota intsony satria efa voavonjin’i Kristy tamin’izany rahateo . Ianao koa : ialao ny faharatsiana, ialao ny fahalotoana eo am-piandrasana an’ i Jesoa indray .
2- Mahatakatra ny famonjen’Andriamanitra (and 15)
« Ary ny fahari-pon’ ny Tompontsika dia ekeo ho famonjena, tahaka ny voasoratr’i Paoly rahalahy malalantsika ». Nisy fampianarana hafahafa tamin’izany fotoana izany nilaza fa tsy misy izany andron’ny Tompo izany. Ampianarin’ i Petera anefa eto fa matoa tsy mbola tonga indray i Kristy dia famonjena izany, fitiavana izany satria manome fotoana ho an’ny olona mba hialany amin’ny ratsy ka handraisany an’ i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy Azy. Mbola famindram-pon’Andriamanitra izany. Ianao koa, fantatro tsara fa isan’ny misitraka izany fahari-pon’ny Tompo izany ianao matoa mbola mahita ity mofon’aina ity . Araraoty , raiso marina i Jesoa .
3- Mitàna tsara ny finoana (and 17)
« Tandremo fandrao ho voataonan’ny fahadisoan’ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin’izay iorenanareo« . Ny mpino dia mahalala tsara izay ambaran’ny Soratra Masina sady efa nampianarina izany ka tokony hifikitra amin’izany mba tsy ho mora mihozongozona na ho mora havilin’ny mpampianatra sandoka ! Tano tsara àry ny finoana izay efa nampianarina anao !
Manao ahoana ny fanantenanao ny tany vaovao sy lanitra vaovao nampanantenain’ny Tompo ?
Sampana Sekoly Alahady FOIBE – FJKM
Talata 27 Jolay 2021
Alatsinainy 26 Jolay 2021
Alahady 25 Jolay 2021
Sabotsy 24 Jolay 2021
Zoma 23 Jolay 2021
Alakamisy 22 Jolay 2021
Alarobia 21 Jolay 2021
Talata 20 Jolay 2021